မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): မြန်မာ့သမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့ နောင်ရိုးတိုက်ပွဲ အကြောင်း
မြန်မာ့သမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့ နောင်ရိုးတိုက်ပွဲ အကြောင်း
တပင်ရွှေထီးသည် ဟံသာဝတီကိုရရှိပြီးနောက် တိမ်းရှောင်နေကြသော
မွန်အမှုထမ်း၊ အရာထမ်းတို့ကို ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးလျှင်
၎င်းတို့၏ ရာထူးအလိုက် ခန့်ထားချီးမြှောက်တော်မူ၏။
ဟံသာဝတီပြည်သားတို့ကိုလည်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ချမ်းသာစွာ
သို့သော် အစိုးရိမ်ကြီးသော သူတို့ကား မြန်မာဘုရင်သည် ငါတို့အား
ပရိယာယ်ဖြင့်ခေါ်၍ နှိပ်စက်ပေလိမ့်မည်ဟု အတွေးဝင်ကာ မုတ္တမသို့
ထွက်ပြေးကြလေသည်။ ကျော်ထင်နော်ရထာသည် မွန်တို့၏ယုံကြည်မှုကို
ရရှိလာအောင် ကြိုးစားစည်းရုံးရာ စစ်သည် အမြောက်အများကို ရရှိလာခဲ့သည်။
တပင်ရွှေထီးသည် ဟံသာဝတီကို ရရှိပြီး သုံးလကျော်ကြာသောအခါ စစ်ရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်သည့် ညီလာခံတစ်ရပ် ကျင်းပတော်မူပြီးလျှင် . . .
“ယခု အထိန်းတော်ကြီးလျှောက်တင်သည်မှာ စစ်ရေးပင်ဖြစ်သဖြင့် အရေးကြီးပါသည်၊ သို့သော် ဟံသာဝတီဘုရင်သည် သူ့မြို့တွင် မခံဝံ့သဖြင့် ပြည်ဘုရင်နှင့်ပူးပေါင်းရန် ပြည်သို့ပြေးလျက်
ပေါင်း၍ခံသော်လည်း စစ်သည်အင်အား များလျှင်သာ များပါလိမ့်မည်။ လုပ်ရည်ကြံရည်၊ လက်ရုံးရည်တွင်မူ ကျွန်တော်တို့ကို တုနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ပြည်ကို အစမ်းချီတက်သင့်ပါသည်။
သာလျှင်လည်း သာသည့်အလျောက် ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ လုပ်ကြံပါမည်။ ၎င်းတို့အား စော်ပွားတို့က ကူညီကြ၍ အရေးသာလျှင်လည်း အလျင်အမြန်ပြန်၍ မုတ္တမကို လုပ်ကြံပါမည်။ သို့ပါ၍ ဘုန်းကြီးသည့် အရှင်က ရေကြောင်းမှချီတက်တော်မူပါ၊ ဟံသာဝတီဘုရင်၏ကျွန် ဗညားဒလနှင့် မင်းရဲအောင်တို့၏ တပ်ကို ကျွန်တော်က ကြည်းတပ်မှလိုက်၍ တိုက်ယူပါမည်” ဟု တက်ကြွထက်သန်သည့်စိတ်ဖြင့် လျှောက်တင်သည်။
တပင်ရွှေထီးသည် ကျော်ထင်နော်ရထာ၏ လျှောက်တင်ချက်ကို
နှစ်သက်တော်မူသဖြင့် ပြည်သို့ချီရန် စီစဉ်တော်မူသည်။ ရေကြောင်းချီရန်အတွက် စက်တော်အောက်သို့ ခိုဝင်လာသူများကို ဟံသာဝတီတွင် ဝှက်ထားသော တိုက်လှေများအားယူစေသည်။ ရေကြောင်းချီတပ်တော်တွင် ဘယကျော်သူ၊ သမိန်ပရူး၊ မင်းမဟာ၊ သီရိဇေယျကျော်ထင်၊ ပိုက်ရနဲ၊ လက်ယာပျံချီတို့ပါဝင်ပြီး၊ တပင်ရွှေထီးကိုယ်တော်တိုင်ပင် ချီတော်မူသည်။
အမိန့်တော်မှာ . . .
ဆက်လက်၍လည်း . . .
“သူရဲကောင်းစစ်သည်တို့ . . .စစ်ပွဲကို မတိုက်ရမီကပင် အောင်မြင်လေပြီဟု မင်းတရားကို ငါလျှောက်ထားခိုင်းခဲ့သည်၊ အကယ်၍ အရပ်အနေမသင့်သောကြောင့် ငါတို့ ရှုံးနိမ့်ပါကလည်း မင်းတရားအနေဖြင့် ငါတို့အား အပြစ်တော်တင်လိမ့်မည်ဟု စိုးရွံ့ခြင်းလည်း မဖြစ်ကြပါနှင့်၊ စစ်ပွဲတွင် ရှုံးပါလျှင် ငါတို့လည်း အသက်နှင့်ကိုယ် မြဲနေတော့မည် မဟုတ်၍ သေဆုံးပြီးသောသူအား မင်းတရား မည်သို့ အပြစ်တော်တင်နိုင်ပါမည်နည်း” ဟု မိန့်ဆိုလိုက်သည်။
“ငါတို့ ရန်သူကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် ဒွိဇာဓိပဗျူဟာဟုခေါ်သည့် ဂဠုန်တောင်ကဲ့သို့ စစ်ထိုးခြင်းပြုရမည်၊ တောမှိုင်းရဲက ဆင်စီးအမတ်(၁၅)၊ မြင်း (၂၀၀)၊ စစ်သည် (၃၀၀၀)ဖြင့် လက်ယာကြောင်းမှ တိုက်ပါ။ ဘယသင်္ဂြာံက ဆင်စီးအမတ်(၁၅)၊ မြင်း(၂၀၀)၊ စစ်သည်(၃၀၀၀)ဖြင့် လက်ဝဲကြောင်းမှ တိုက်ပါ။ ငါက ဆင်စီးအမတ်(၂၀)၊ မြင်း(၁၀၀)၊ စစ်သည်(၄၀၀၀)ဖြင့် အလယ်ကြောင်းမှ တိုက်မည်” ဟု တာဝန်ပေးသည်
နောင်ရိုးတိုက်ပွဲကို အောင်မြင်ပြီး၊ နောက်တစ်ရက်တွင် တပင်ရွှေထီး၏ တပ်တော် ရောက်ရှိလာသည်။ ရောက်ရှိတော်မူသည်နှင့် တပင်ရွှေထီးက . . “ကျော်ထင်နော်ရထာ . . . သင်သည် ငါ့ကိုမစောင့်ဘဲ ရန်သူကို တိုက်နှင့်သည်၊ ငါ၏ပွဲကို ဖျက်သည်မဟုတ်လော” ဟု အမေးတော်ရှိသည်။
“ယခုနောင်ရိုးတိုက်ပွဲမှာ ဘုန်းတော်ကြီးသည့်အရှင်နှင့် ထိုက်တန်သော စစ်ပွဲမဟုတ်ပါ၊ ကျွနိုပ်ကျွန်တို့နှင့်သာ ထိုက်တန်သည့်ပွဲဖြစ်ပါသည်၊ ကျွန်ကျွန်ချင်း တိုက်ရသောပွဲဖြစ်၍ အကျွနိုပ်တိုက်ပါသည်၊ နောင်တွင် လုပ်ကြံရမည့်ပွဲလည်း များပါသေးသည်၊ ဟံသာဝတီမင်း၏ တပ်နှင့်တွေ့မှသာ အရှင်တိုက်တော်မူပါ” ဟု စိတ်တော်ပြေစေရန် လျှောက်တင်ပြီး သိမ်းဆည်းရရှိသော ဆင်၊ မြင်း၊ လက်နက်၊ သုံ့ပန်း တို့ကို တပင်ရွှေထီးထံ ဆက်သသည်။
Posted by New World
Author Unknown at 6:00:00 AM